Goolhayihii Hore Ee Xulka Gobolka Maroodi-Jeex Oo Qaliin Jilibka Ah Loogu Sameeyay Dalka Germany + Sawirro
HomeWararka MaantaGoolhayihii Hore Ee Xulka Gobolka Maroodi-Jeex Oo Qaliin Jilibka Ah Loogu Sameeyay Dalka Germany + Sawirro
Goolhayihii hore ee xulka kubadda cagta gobolka Maroodi-Jeex iyo kooxda heerka koowaad ee D.H.H Guuleed Cabdi Cabdilaahi (Guuleed Fernando), ayaa waddanka Germany loogu sameeyay Qaliin culus oo dhinaca Jilibka ah, kaas oo uu muddooyinkii ugu dambeeyay uu la dhibtoonayey.
Guuleed Cabdi Cabdilaahi (Fernando) oo sannadihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Germany ayaa u ciyaara koox heerka labaad ah oo magaceeda la yidhaahdo Stihier, taas oo ka ciyaarta horyaalka kubadda cagta heerka labaad ee waddanka Germany, gaar ahaan gobolka Mainz.
Haddaba Guuleed Fernando oo Maanta lagu sameeyay qaliinkan ayaa la soo xidhiidhay shabakadda ciyaaraha ee www.cadalool.com, waxaana uu xusay dhaawacan jilibka ka soo gaadhay iyo heerka uu leeg yahay, waxaana uu yidhi “Dhaawac xun ayaa iga hayey jilibka midig kaas oo aan muddooyinkii u dambeeyay la dhibtoonayey, qaliinkayga waxaa laygu sheegay inuu yahay mid war-war leh, maadaama oo laygu sheegay inaanan dib u ciyaarayn kubadda. Qaliinka laygu sameeyay wuxuu qaatay 7:30 subaxnimo ilaa 11:00 duhurnimo, waana lagu guuleystay, xaalkayguna wuu fiican yahay”.
Goolhayahan khabiirka ah ayaa sidoo kale Cadalool.com u sheegay muddada uu dhakhtarka ku jirayo iyo sidoo kale wakhtiga uu garoomadda ka maqnaanayo “Waxaanan dhakhtarka ku jirayaa muddo 6-cisho ah, waxaana dhaawacan dartii aan kooxdayda kaga maqnaanaya siday dhakhtaradu cadeeyeen muddo 8-toddobaad ah” ayuu yidhi.
Laacibkan ayaa si weyn loogu xasuustaa kaalintii weynayd ee uu ka ciyaaray guushii xulka gobollka Maroodi-Jeex ku hantay koobkii kubadda cagta gobollada Somaliland ee 2013-kii, iyo sidoo kale guulihii wax ku oolka ahaa ee ay kooxda D.H.H gaadhay muddadii uu ka tirsanaa. Ugu dambeyntii, Guuleed Fernando ayaa bartiisa facebook soo dhigey inuu aad u wanaagsan yahay kadib qaliin Jilibka loogu sameeyey.